“No” [Tsia], Ilay Fanentanana Mamirapiratra Sy Mijery Lafitsaran-Javatra Nampahavitrika Revolisiona Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2014 15:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Deutsch, polski, English
Ny sarimihetsika nivoaka tamin'ny 2012 mitondra ny lohateny hoe “No” notontosain'i Pablo Larraín, no milaza ny tantaran'ny fitsapa-kevi-bahoakan'i Pinochet tamin'ny 5 oktobra 1988 amin'ny fijery miabo – fa tsy lasa sarimihetsika fanadihadiana akory izy io. Ny mpilalao fototra tamin'io – René Saavedra (Gabriel García Bernal) dia tanora mamiratra mpiasan'ny fanaovana dokambarotra mahatsangana zava-baovao sady zanaka mpitarika mpanohitra fanta-daza izay niverina tany Chile rehefa lehibe tany an-tsesintana tao Meksika. Ny talentany sy ny fianakaviana niaviany no nisarika ny lehiben'ny fanentanana ho amin'ny “No” [tsia], José Tomás Urrutia (Luis Gnecco), niangavy azy handray anjara amin'ny fanaovana tetipanorona sy ny fanaingoana ny “sisindamba” (anarana nomena ny fandaharana ofisialy 15 minitra ao amin'ny fahitalavitra natao hanaovan'ny antoko rehetra propagandy politika).
Lasa tsontsa loatra kosa raha mieritreritra fa ilay dokambarotra nandritra ny fifidianana irery dia nahavita nanala mpanao didijadona irayr. Saingy mahaliana ny manome lanja ilay hevitra natolotra nandritra ity fanentanana [propagandy] ity: mandinika indray ny fomba iarovana ny ankehitriny amin'ny alalan'ny famindra-toerana ny zavatra miiba, ny ratsy ary ny hirifiry mankany amin'ny fanantenana sy ny fahasambarana – ary nahoana tokoa moa ny tsikitsiky – izay mety ho entin'ny ampitso. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nanatri-maso ny hetsika revolisionera manerana izao tontolo izao isika, saingy nahita ihany koa ny tsy rariny sy herisetran'ny daholobe. Maro amintsika no efa nahatratra ny fertan'ny hafa-pitolomana tafahoatra izay mahakivy matetika. Misy ny manampahaizana momba ny Media tahaka an'i Wendy Johnston sy Graham Davey nandalina ny fahitana fa ny fahamaroan'ny sary sy ny tantara feno faharatsiana mihoampampana dia mety ho ampy hahatonga ny olona iray ho tsy miraharaha, na lasa tsy mahavita na inona na inona aza. Mety miankina aman'aina tokoa ny mitady lalam-baovao hanelezana io fahatsapana fahamehana mankany amin'ny filaminana sy ny fahafahana io — maro ny mpikatroka efa manao izany, ary mitsena fahombiazana tokoa. Ny lahatsary mampihomehy “No Woman, No Drive” (teny vilana amin'ny hiran'i Bob Marley amin'ny “No Woman, No Cry”) natsangan'ilay mpanao hatsikana Saodiana Hisham Fageeh ho fanohanany ny fanentanana Women2Drive [VehivavyHamilyFiara] izao dia ohatra iray amin'izany fahaiza-mampiseho fahaizana izany — Hafa koa i Syria Untold, sehatra an-tserrasera mampisongadina ny tetikasa vaovao sy ara-panaovan-gazety ao anatin'ny fitroarana tsy mampiasa herisetra.
Tao amin'ny GV Face nokarakaraina vao tsy ela izay, ny mpiara-manorina ny GV Ethan Zuckerman sy ireo Tonian'i GV Solana Larsen, Sahar Habib Ghazi, ary Ellery Roberts Biddle no niresadresaka momba ireo ampidirina sy avoaka amin'ny “fanaovan-gazety mamaha olana.”